Ka Faa'iidaysta sida Hacker! - Khabiirka Cilmi-baarista wuxuu sharxayaa sida loo ilaaliyo Website-kaaga
Wararka ku saabsan jabsashada bogga internetka ayaa dhamaantood ku saabsan wararka maalin kasta. Malaayiin xog ah ayaa la soo gabagabeynayaain gacmoonayaasha 'hackers' kuwaas oo wax u dhimaya xogta, ka xado macluumaadka macmiilka iyo xogta qaali ah ee keenta xatooyada aqoonsiga marmarka qaarkood. Waaweli aan la ogeyn inta badan sida shabakadaha internetka ee khawano-bixiyeyaashu u dhaqmaan si aan loo fasaxin kombuyuutarradooda.
Jack Miller, khabiir ka socda Sare ,wuxuu ku qeexay macluumaadka ugu muhiimsan ee ku saabsan hackingka inuu kugu garaaco weerarada.
Waa muhiim in la fahmo in shabakadaha hackers ogaadaan dhismahagoobta ka badan kuwa horumarinta webka sameeyo - itaste mvp kanger protank. Waxay si fiican u fahmayaan isku-gudbinta labada-qaab ee shabakada kuwaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay diraan oo helaan xogtalaga bilaabo xafiisyada codsi.
Dhismaha barnaamijyada iyo website-yada waxay xisaabtamayaan baahida isticmaalayaashawuxuu u baahan yahay dirista iyo helitaanka xogta. Khadka shabakadaha internetku waxay og yihiin in bogagga internetka ee abuura bogagga internetka ee dukaamada online ay fududeeyaanbixinta badeecadaha kadib marka lagu geliyo gawaarida dukaamada. Marka ay soo saarayaashu internetka sameeyaan barnaamijyo, waxay ku wareeraan macaamiishoodaiyo ku fashilmaan in ay ka fekeraan hanjabaadaha sirta koodhka by hackers bogga.
Sidee Xayiraaduhu Shaqeeyaan?
Khadka shabakadaha internetka ayaa fahansan in meheliyadu ka shaqeeyaan barnaamijyada codsanayaMacluumaadka oo hirgalinta ansixinta kahor feylasha guul-celinta xog-helitaanka. Nidaamka xogta aan sharci ahayn ee barnaamijka, waxaa lagu magacaabaa talooyin xunansaxinta, waa aqoonta asaasiga ah ee ka dambeeya jabsiga. Waxay dhacdaa marka xogta xogtu aysan u dhigmin filashada sida waafaqsanKootaroole loo habeeyey..Bulshada shabakadaha internetka ee khawano-bixiyeyaasha waxay isticmaalaan dhowr siyaabood oo lagu bixinayo talooyin aan sax ahayn barnaamijyada ay ku jiraanqaababka soo socda.
Sidoo kale loo yaqaan weerarka aamusnaanta, diyaarinta qoraalka ayaa ku lug leh weerarka xogtagaadiidka. Isticmaalayaasha ama maamulaha bogga ma ogaanayaan weerarka inta lagu jiro is-dhaafsiga macluumaadka. In habka loo diro userCodsi xog ah oo ka yimid maamulaha, shabakadaha shabakadaha internetka ayaa wax ka beddeli kara xogta ka timid user ama server si ay u helaan xuquuqda aan sharciyeysneyn. XirmadaEditing sidoo kale waxaa lagu magacaabaa Man ee Weerarka Dhexe.
Weerarrada Isku Bedelka
Mararka qaar shabakadaha internetka ee khawaaniinta ah ayaa hela helitaanka kombuyuutarrada isticmaalaha adigoo kaydinaya xaasidnimocodsiyada ku saabsan macaamiisha aaminsan. Xeerka xaasidnimada ayaa ku dhibaateeya dadka isticmaala marka amarrada lagu martiqaado PC-ga isticmaalka adoo gujinaya links amalagu soo daabacay faylasha. Qaar ka mid ah weerarrada caanka ah ee caadiga ah waxaa ka mid ah calaamadaynta dalbashada goobta iyo xarfaanta bogga.
shabakadaha shabakadaha internetka ayaa sameeyn kara mid ka mid ah jajabka ugu xanaaq badan weerarka aserver si aad u weerarto goobaha. Qeybta kambiyuutarrada waxay u nugul yihiin server-ka waxayna isticmaalaan si ay u afduubaan nidaamka ayna u gutaan xuquuqda maamulkasida faylka faylasha. Waxay qaban karaan sida dhibaatooyinka khatarta ah ee xadida aqoonsiga iyo qashinka bogga.
Ilaalinta laga soo qaado Hackers Website
Developers Website waxay u baahan yihiin inay u fakaraan sida jilayaasha. Waa inay ka fekeraan siyaabahaXeerarkooda waxay u nugul yihiin kombiyuutarrada shabakada marka ay dhisaan goobaha. Horumarinta waa in ay abuuraan qoodhi ay soo saaraan furayaasha ilaha iyagoo baxsanayaxuruufaha gaarka ah iyo xeerarka dheeraadka ah si looga fogaado helitaanka amarrada waxyeellada ka soo jeeda shabakadaha internetka. Barnaamijka GET iyo POST ee barnaamijyadawaa in si joogto ah loo kormeero.
Nabadgalyada codsiyada internetka ayaa sidoo kale hubin kara nabadgelyada weerarrada shabakadaha internetka.Nabadgelyadu waxay ilaaliyaan barnaamijka kumbuyuutarka iyagoo hubinaya in ay wax ka qabanayaan maadaama ay diidayso helitaanka. Codsiga dalabka firfircoon ee loo yaqaan "cloud-based firewall"Cloudrik waa codsi ilaalin ah oo loogu talagalay ammaanka internetka ugu dambeeyay.